इटलीका प्रधान मन्त्री ३० अक्टोबरमा भारत आउनुहुँदै | ESD | नेपाली
इटलीका प्रधान मन्त्री ३० अक्टोबरमा भारत आउनुहुँदै
इटलीका प्रधान मन्त्री प्रोफेसर गिउसेपे कोन्टे यही अक्टोबर महिनाको ३० तारिखमा भारतको यात्रामा आउँदै हुनुहुन्छ। श्री कोन्टेका साथ एउटा शिष्टमण्डल पनि आउनेछ जसले डि.एस.टि.-सि.आइ.आइ. भारत –इटली प्रौद्योगिकी शिखर बैठक २०१८-मा भाग लिनेछ। यो प्रधान मन्त्री कोन्टेले जून २०१८–मा पदभार सम्हाल्नुभएपछि उहाँको यो पहिलो भारत यात्रा हुनेछ।
यात्राको दौरान उहाँले प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीसित ३० अक्टोबरमा द्विपक्षीय वार्ता गर्नुहुनेछ। त्यसपछि दुई नेताहरूले प्रौद्योगिकी शिखर बैठकको समापन सत्रलाई सम्बोधित गर्नु हुनेछ। यो शिखर बैठकको यस प्रकरणमा इटली साझेदार मुलुक रहेको छ।
प्रौद्योगिकी शिखर बैठकको आयोजन डिपार्टमेन्ट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी (डि.एस.टि.) अर्थात् विज्ञान एवम् प्रौद्योगिकी विभागले गर्दैछ। शिखर बैठकको यो प्रकरणमा साथ क्षेत्रहरू – स्वच्छ प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय, आइ.सि.टि., स्वास्थ्य सेवा, एयरोस्पेस, शिक्षा र सांस्कृतिक विरासतमाथि ध्यान केन्द्रित गरिनेछ।
शिखर बैठकको उद्देश्य प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण, संयुक्त उद्यमहरू, अनुसन्धान एवं विकास, र भारत र इटलीका उद्योग र अनुसन्धान संस्थानहरूबिच बजार पहुँच प्रदान गर्नु हो।
इटलीका प्रधान मन्त्रीको यात्रा भारत र इटलीबिच कुटनयिक सम्बन्ध स्थापनाको ७०औँ वर्षगाँठ पालनाका लागि चलिरहेका समारोहहरूमा भाग लिनु हो।